ပညာရေး Archives - BuzzFeed Myanmar
ငရှဥ့် (သို့မဟုတ်) စတီးဝပ်အချုပ်ကို မျက်လှည့်ပြခဲ့သူ
အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ ဂန္တဝင်လူမိုက်ကြီးသေဒဏ်ကြိုးလွတ်မြဂေါင်ကို ထောင်ထဲမှာသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သာကေတကွင်း မသိမ်ချောင်းသား ငရှဥ့်ရဲ့ ရာဇဝင်ကလည်း တော်ရုံတန်ရုံမဟုတ်ပါဘူး။ ငရှဥ့်က ခိုးဆိုးလုယက်မှုပေါင်းများစွာကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးအသီးသီးက နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဥပဒေကိုလက်တစ်လုံးခြားလုပ်တတ်တဲ့ ငရှဥ့်တို့လို ဒုစရိုက်သမားတွေက ထောင်အပြင်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ထွက်လို့ရအောင် ဒါမှမဟုတ် ထောင်ထဲက ထွက်ပြေးနိုင်အောင်အမြဲတမ်း အကြံထုတ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လည်း စိတ်ကူးထားတဲ့ အကြံအစည်အတိုင်း အင်းစိန်ထောင်ထဲက လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ငရှဥ့် လွတ်သွားပုံကိုလေ့လာရင် ကြိုတင်အကွက်ချစီစဉ်မှုမှာ ဆရာကြီးတစ်ပါးဆိုတာ ပေါ်လွင်လာပါတယ်။
ကားပေါ် ကနေ စစ်သားကြီး တွေ ဆင်း လာ တယ်… စစ်သားကြီး တယောက်က ကျွန်မဆီလျှောက် လာပြီးး
ရှေ့တန်ပြန် စစ်ကားကြီးတွေ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆေးခန်းရှေ့မှာ လာရပ်တယ်…
” ဆရာမလေး ကွမ်းယာဆိုင်ဘယ်နားရှိသလဲ”
ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆရာ/မတွေ တံတွေးခွက်ထဲပက်လက် မျောနေရပြီလား?
G2 ဆိုတဲ့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ဒုတိယတန်းသင်ရိုးသစ်ကိုပဲ အခြေပြုပြီး ပြောပြပါရစေခေတ်စနစ်နဲ့အညီပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာရေးမဟုတ်ရပါဘူးပညာရေးကို စီမံကိန်းတွေချမှတ်ပြီး အကော်အထည်ဖော်လာခဲ့တာ KG,G1 နဲ့ ခု G2ဆိုပြီး ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါပြီနိုင်ငံတကာနှင့်အညီ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ ခုလိုကျောင်းစာသင်တဲ့ကလေးတွေကနေစပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ကြရပါတယ်
အခြေခံပညာ အတန်း များ၏ အောင်စာရင်းကို ဧပြီ ၂၂ ရက်နှင့် အခြေခံပညာ နဝမတန်းကျောင်းတွင်းစစ် (ပြင်ပဖြေ)
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာအတန်းများ၏ အောင်စာရင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ အခြေခံပညာနဝမတန်းကျောင်းတွင်းစစ် (ပြင်ပဖြေ) စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို မေ၂၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြေခံပညာ အတန်း များ၏ အောင်စာရင်း များ ဧပြီ ၂၂ ရက်ကြေညာမည်
စတုတ္ထတန်းနှင့် အဋ္ဌမ တန်းအပါအဝင် အခြေခံပညာ အတန်းများ၏စာမေးပွဲအောင်စာ ရင်းများကို ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပြော ကြားသည်။
သင်္ကြန် ကာလနောက်ပိုင်းတွင် အဝးသင်တက္ကသိုလ်စာစဉ်များကို အွန်လိုင်းမှ ဖြေဆိုနိုင်တော့မည်
လာမည့်သင်္ကြန်ကာလကျော်လွန်ပါက အဝေးသင်တက္ကသိုလ် စာစဉ်အဆိုင်းမန့်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ရယူဖြေဆိုနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
သင်တန်း မတက်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာအောင် ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ….?
အင်္ဂလိပ်စာကို တကယ်လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ သင်တန်းတွေတောင်သွားတက်နေစရာမလိုပါဘူး….။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်။ လိုချင်စိတ်သာရှိရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲ အင်္ဂလိပ်စာကို တကယ်လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာလေ့လာဖို့မခက်ပါဘူးနော်…။ ဒီတော့ သင်တန်းသွားမတက်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ် လေးများတွက် သတင်းကောင်း
ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ တွင်ဘာသာစုံ နီးပါး မော်ရေးရှင်း ပေးထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှူးရုံးမှ ဆရာ ဦးဘသိန်း ကပြောကြားခဲ့သည်။ဆရာ ဦးဘသိန်း အားမေးမြန်းခဲ့ရာ ”ဒီနှစ်ကအစိုးရအပြောင်းအလဲ ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ ခလေးတွေကို လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ လုပ်ပေးဖို့ ဆရာတို့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ဘွဲ့မရသေးသည့် ကျောင်းသား များ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ အာဆီယံ-ကနေဒါ ပညာသင်ဆု
ကနေဒါနိုင်ငံမှ ပေးအပ်မယ့် “2030 Agenda for Sustainable Development 2018-2019 Academic Year Canada-ASEAN Scholarship and Educational Exchange for Development (SEED)”ပညာသင်ဆုကို ဘွဲ့မရသေးတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများပါ လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်က သိရပါတယ်။